हिंजोदेखि नेपालमा 'कोरोना जन्तर'को चर्चा चुलिएको छ । के हो त यो जन्तर ? जापानको एउटा कम्पनीले क्लोरिन क्लोरिन डाइअक्साइड प्रोड्युसर, ग्यास स्टेइन रिलिज एजेन्ट, ब्याम्बो कार्बनजस्ता रसायनहरू राखेर घांटीमा झुन्ड्याउने परिचय पत्रजस्तो डिभाइस ३-४ महिना पहिले निकालेको थियो । यसलाई जापान, हङकङ, चीन, भियतनाम, अरबका देशहरु लगायत धेरै देशमा प्रयोग गरिंदै आएको छ ।
जसरी ओडोमस वा धुप लगाउँदा लामखुट्टे भाग्दछन् त्यसैगरि यो घाँटीमा झुन्ड्याउदा एलर्जी गराउने तत्व, ब्याक्टेरिया तथा भाइरस भाग्छन् भन्ने कन्सेप्ट राखेर यो कार्ड बनाइएको हो । यो कार्डले ३० दिन काम गर्ने तथा ५० सेन्टिमिटर वरिपरी काम गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै यसले बिरामी, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका र इम्युनिटी पावर कम भएका व्यक्तिलाई उपयोगी हुन्छ भनेर उत्पादक कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । हङकङका भाइरोजिष्ट तथा इम्युनिलोजिष्ट डा. एरिन डेविडसनले यो कार्डबारे भनेका छन्-यो पुरै भ्रम हो, यसले स्वाशप्रश्वासजन्य भाइरसबाट सुरक्षा गर्दैन ।
यसको अध्ययन गर्दा मेरो के निष्कर्ष छ भने यसले कोरोना संक्रमण रोक्न कुनैपनि काम गर्दैन । नाक तथा मुखको नजिक राख्दा यसमा भएको क्लोरिन डाइअक्साइडले आँखा, छाला तथा स्वाश्प्रश्वासमा गम्भीर असर गर्न सक्दछ । क्लोरिन डाइअक्साइड भुँई, टेबुल आदि सफा गर्न प्रयोग गरिन्छ । यसलाई अनुहारको नजिक ल्याउनु हुँदैन ।
यसलाई भियतनाम लगायतका देशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसको प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा फल्स प्रोटेक्सन अर्थात गलत रुपमा सुरक्षित महशुस हुने भएकोले प्रयोगकर्ताले सुरक्षा सतर्कता नअपनाउने खतरा हुन्छ । जसले गर्दा कोरोना संक्रमण सर्ने जोखिम बढ्दछ । कोभिड १९ को कुनैपनि औषधि तथा खोप नभएको समयमा मान्छेको भावनालाई क्यास गर्न बिभिन्न कम्पनीले समयसमयमा ल्याउने उपभोग्य वस्तुमा हामीले विश्वास गरेर प्रयोग गरिहाल्नु हुँदैन ।
चीनको कम्पनीले पनि निकालेको यो कार्डको निर्यातकर्ताले नेता तथा सभासदलाई उपलब्ध गराएर निशुल्क रुपमा ठूलो विज्ञापन गर्न सफल भएको छ । संसद भवन वरिपरी बेच्न राख्नुको अर्थ बुझ्न केही गाह्रो छैन ।
पाण्डे जनस्वास्थ्य विज्ञ हुन्।
प्रकाशित मिति: शनिवार, असार १३, २०७७, ०४:२२:२३
रुपन्देहीमा थपिए १ महिलासहित ५ जना संक्रमित
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचाररत २ जना बिरामीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण
रुपन्देहीमा कोरोना संक्रमितको संख्या चार सय नाघ्यो, ६७ जनाको उपचार जारी
कोरोना विशेष अस्पताल बुटवल धागो कारखानामा २ जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना लक्षण देखिएर अस्पताल गरिएका कपिलवस्तुका २५ र ४२ वर्षिय पुरुषको मंगलबार राती मृत्यु भएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डा विष्णु गौतमले जानकारी दिए। पुरा पढ्नुहोस्
मंगलवार, श्रावण २७, २०७७ लुम्बिनी टाइम्स
कपिलवस्तु–कपिलवस्तु नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा एकैपटक ११ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर १ स्थित तौलिहवा बजारमा विभिन्न पेशा गर्दै आएका ११ जना संक्रमित थपिएका हुन्। पुरा पढ्नुहोस्